कैलालीकाे भादागाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होर्डिङ बोर्ड राखियो - Everest Dainik - News from Nepal
कैलालीकाे भादागाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होर्डिङ बोर्ड राखियो
२०७६, ४ माघ शनिबार
कैलालीः पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि धनगढीको भादागाउँ होमस्टे होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ । नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई सफल पार्नका लागि धनगढी लेडी जेसिजको आयोजनामा थारु गाउँको होमस्टे जाने वाटोमा होर्डिङ बोर्ड राखिएको हो ।
पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि धनगढी लेडी जेसिजले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित भादागाउँमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन झल्कने होर्डिङ बोर्ड राखिएको धनगढी लेडी जेसिजकी अध्यक्ष लक्ष्मी शाहीले बताइन् ।
वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण चौधरीले रिवन काटेर होर्डिङ वोर्ड राख्ने कामको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कोहीलही ताल जाने, वेहडावावा जाने र होमस्टे जाने ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राखिएको हो । होर्डिङ बोर्डको सहायताले सो क्षेत्रमा जाने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । होर्डिङ बोर्ड राख्ने कार्यक्रममा धनगढी लेडी जेसिज र धनगढी जेसिजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
भादा होमस्टेको आकर्षण
भादामा थारू समुदायको परम्परागत जीवनशैलीको अवलोकन गर्न सकिन्छ । पर्यटकहरूका लागि तयार गरिएका घर पनि परम्परागत तवरले नै निर्माण भएका छन् । चारैतिर जंगलले घेरिएको भादा गाउँ निकै आकर्षक गाउँ हो । गाउँ नजिकै रहेको जोगिन्या ताल, पाँच किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको बेहडाबाबा मन्दिर, गणेश सामुदायिक वन पर्यटकका लागि अवलोकन गर्ने महत्वपूर्ण स्थान हुन् ।
ताल वरपर क्षेत्रको शान्त वातावरणले त्यहाँ घुम्न जाने जो कोहीको मन लोभ्याउँछ । त्यहाँको सामुदायिक वन जंगली जनावर र जडीबुटीको भण्डार नै छ । वन क्षेत्रमा स–साना जंगली जनावर सजिलै देख्न सकिन्छ । ताल र बेहडा बाबा क्षेत्रको अवलोकनमा पनि पर्यटकलाई कुनै झन्झट छैन । पर्यटकलाई घुमाउन दुई ओटा लहरू (परम्परागत गोरूगाडा) तम्तयार हुन्छन् । लहरूमा एक पटक चारजनासम्म बस्न मिल्छ । लहरूमा बसे बापत केही शुल्क भने तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस एम्बुलेन्सको ठक्करबाट सशस्त्रका हवल्दारको मृत्यु
चारैतिर जंगलले घेरिएको भादा गाउँ निकै आकर्षक गाउँ हो । पर्यटकलाई गाउँ घुमाउन गाइडको समेत व्यवस्था छ । तिनले विभिन्न जानकारी दिँदै गाउँ घुमाउँछन् । खानपिनका लागि थारू समुदायमा पाइने प्रायः सबै परिकार यहाँ पाइन्छ । पर्यटकलाई नाचगान देखाउन सांस्कृतिक टोली बनाइएको छ ।
भादा कसरी पुग्ने ?
भादा जानका लागि थुप्रै बाटा छन् । तर, ती कतै कच्ची त कतै ग्राभेल गरिएका छन् । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको दुई ठाउँबाट भादा पुग्न सकिन्छ । ती चौमाला गाविसको झिल र राजीपुर हुन् । झिलबाट बेहडाबाबा हुँदै सात किलोमिटरको यात्रा पार गरेपछि भादा पुगिन्छ । त्यस्तै, राजीपुरको बाटो अलि घुमाउरो छ तर सहज छ । त्यहाँबाट भादा पुग्न १२ किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।
सदरमुकाम धनगढीबाट भादा जाने तीन ओटा बाटा छन् । जसमध्ये सबैभन्दा छोटो बाटो क्याम्पस रोडबाट थोरै पूर्व मोतीचोकबाट बायाँ हुँदै जाने बाटो हो, जसको दूरी १५ किलोमिटर मात्रै छ । मोतीचोकबाट बायाँ मोडेपछि सोझै केही जंगल क्षेत्र पार गरेपछि पटेला गाउँ पुगिन्छ । पटेला गाउँपछि खुटिया नदी तर्नुपर्छ । जहाँ, साइकल, मोटरसाइकल र पैदलयात्रुका लागि काठेपुल बनाइएको छ ।
अन्य सवारी साधनले नदी सहजै पार गर्न सक्छन् । नदी तरेपछि अर्को गाउँ लगत्तै शिवगंगा नदी आइपर्छ, त्यहाँ पनि खुटिया नदीमा जस्तै काठेपुल छ । त्यसपछि सुरू हुन्छ जंगल क्षेत्र, जहाँ थुप्रै बाटा छन् । हरेक दुईओटा बाटो आउनेबित्तिकै दाहिने बाटो समात्नुपर्छ । दाहिने बाटो समात्दै अघि बढेपछि तिलकपुरुवा गाउँ पुगिन्छ । त्यसको केही मिनेटमै आउने एउटा अर्को पुल तरेपछि गन्तव्य स्थल भादा गाउँ पुगिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस कैलालीमा मोटरसाईकलको ठक्करबाट एकको मुत्यु
झिलबाट बेहडाबाबा हुँदै सात किलोमिटरको यात्रा पार गरेपछि भादा पुगिन्छ । त्यस्तै, राजीपुरको बाटो अलि घुमाउरो छ तर सहज छ । त्यहाँबाट भादा पुग्न १२ किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्छ । एउटा अर्को बाटो क्याम्पस रोडबाट सोझै फूलबारी जाने बाटो छ । जुन खुटिया नदी पार गरेपछि बायाँतर्फको बाटो समात्नुपर्छ । यो १७ किलोमिटर टाढा छ । यहाँबाट उर्मा गाविसको कार्यालय हुँदै भादा पुगिन्छ । अर्को सबैभन्दा लामो बाटो २५ किलोमिटरको छ, जुन जोखर तालबाट पथरी हुँदै बेहडाबाबा मन्दिरसम्म पुग्छ । त्यस बाटोबाट गए पनि खुटिया र शिवगंगा नदी पार गर्नैपर्छ ।
साधन के प्रयोग गर्ने ?
भादा गाउँ जान कुनै पनि सार्वजनिक यातायातको साधन छैन । जुन बाटोबाट जाँदा पनि आफैंले व्यवस्था गरेको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा उपयुक्त साधन मोटरसाइकल या साइकल नै हुन् । चारपांग्रे साधन पनि लैजान सकिन्छ । त्यसो त स्थानीय बासिन्दाले पर्यटकका लागि लहरूको व्यवस्था गरेका छन् । त्यसमा यात्रा ढिलो हुन्छ तर लहरूमा बसेर चारैतिर अवलोकन गर्दै जानुको मजा नै बेग्लै छ ।
कति खर्चिलो ?
भादा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै खालका पर्यटकका लागि हो । विशेष गरेर बाह्य पर्यटकका लागि यो एकदमै उपयोगी हुन सक्छ । अझ थारू समुदायमा हराउँदै गएको परम्परागत पक्षबारे अध्ययन गर्नका लागि बढी उपयोगी हुन सक्छ । थारू समुदायको मात्रै बसोबास रहेको भादा गाउँ आफैंमा एक अध्ययन गर्नैपर्ने स्थान हो । कारण, यहाँको दैवी शक्तिले थारू बाहेक अरू कोही जाति स्थायी बसोबास गरेर टिक्न सक्तैन भन्ने गुरुबाहरूको भनाइ छ । अझ त्यसमाथि स्थानीय बासिन्दाले यो अवसर जुराएपछि अनुसन्धानकर्ताका लागि सुनमा सुगन्ध हुन सक्छ ।
याे पनि पढ्नुस घरमै पर–पुरुषसँग भेटेपछि श्रीमानले गरे श्रीमतीको हत्या
कामको धपेडीबाट केही दिन थकान मार्न खोज्नेका लागि भादा गाउँ उपयुक्त थलो बन्न सक्छ । बजार क्षेत्रको बसाइभन्दा भादा गाउँ एकदमै सस्तो छ । एक जना अट्ने ओछ्यानको एक रातको मूल्य एक सय रुपैयाँ हो । अझ दुई जना अट्ने ओछ्यानको त डेढ सय मात्रै तिरे पुग्छ । खानेकुराको मूल्य भने परिकारपिच्छे फरक रहेको छ । जाडोमा आगो ताप्दै खानपिन गर्ने प्रयोजनले छुट्टै घरहरू बनाइएका छन् । हरेक घरका बीचमा अगेना राखिएको र ती अगेनाको चारैतिर आठजनाको समूह बसेर रमाइलोसँग खानपिन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
एक रातमा कति जना बस्न सक्छन् ?
२०६८ सालमा स्थापना भएको होमस्टेमा पर्यटकका लागि गाउँमा १९ ओटा घर निर्माण भएका छन् । जसमा एक रातमा ५७ जनासम्म सुत्न सक्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक र बाह्य गरी ५० हजार पर्यटकको आगमन भइसकेको होमस्टेका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण र्चाधरी बताउँछन् । नवनिर्मित घरमा ओढ्ने ओछ्याउनेदेखि सबै कुरा नयाँ नै व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटककै लागि भनेर शौचालय र स्नान घर छुट्टै तयार छन् । खानेपानी र बिजुलीको समेत व्यवस्था छ ।
पर्यटकको सुरक्षाप्रति स्थानीय बासिन्दा संवेदनशील छन् । उनीहरूले पर्यटकका लागि केही नीति–नियम समेत बनाएका छन् । गाउँका युवालाई स्वयंसेवकक रूपमा खटाइन्छ । उनीहरूले पर्यटकलाई असुरक्षा महसुस भएका बेला सुरक्षा दिने गर्छन् । तर, स्थानीय बासिन्दाको नीति नियममा नबसेर अरूलाई असर पुर्‍याउने पर्यटकलाई स्वयंसेवकले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् । परिवार सहित एक पल्ट घुम्न जाने पो हो कि भादा थारू गाउँ ?
ट्याग्स: कैलाली, धनगढी लेडी जेसिज, भादागाउँ होमस्टे, होर्डिङ बोर्ड
जनताको सेटिङलाई कसैले भत्काउन सक्दैन– प्रचण्ड
केपी ओली भगौडा विश्वासघाती हुन्, पार्टीबाटै निष्काशन गरिसक्यौंः झलनाथ खनाल
मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेवुल
आन्दोलनकारीको दवावपछि मंगोलियाका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा
Coronavirus Australia live news: Scott Morrison to provide COVID-19 update after National Cabinet meeting
Follow all today's updates on our live blog. Key events. 41 m minutes ago Thu Thursday ...
The pros and cons of raising minimum wages to $15 an hour, experts weigh in
CORPUS CHRISTI, Texas — As part of President Joe Biden's pandemic-economic relief plan, he's proposing an increase in the current federal minimum wage. "Raising the minimum wage to $15 an hour sounds likealot right, because the current level is at ...
Arkansas reports more than 3100 new coronavirus cases
“The increase in new cases is disappointing andareminder that we cannot let up in following the public health guidelines,” Gov. Asa Hutchinson said inastatement. “Our vaccines are getting into the arms of Arkansans, but remember, we are totally dependent ...
UFC 257:3reasons to watch Conor McGregor vs. Dustin Poirier
He was the longtime Bellator lightweight champ and is looking to see where he stands inastacked UFC lightweight division. Chandler will fight Dan Hooker in the co-main event on Saturday. Hooker hasanumber ...
Nearly half of Wisconsin's adult population may be eligible for vaccine. What next?
Children remain ineligible because they were not included in clinical trials for vaccines from Pfizer and Moderna, the only ones currently on the U.S. market. Health officials have said children may be cleared for shots in the second half of 2021.